यो अनुभवले अहिले नागरिकको आवश्यकता के हो र कहाँ के के चाहेको छ हामी भन्न सक्छौ। के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्न सक्ने भएका छौं।
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिक, रसुवा
रसुवा जिल्लाका ५ गाउँपलिका मध्ये आमाछोदिङ्मोे पनि एक हो। आमाछोदिङ्मा जम्मा ५ वटा वडाहरू
रहेका छन् । यस गाउँपालिकाले ६८२.२३ वर्ग कि.मि. क्षेत्र रहेको छ । यो गाउँपालिका साविकका
गा.वि.स.हरु हाकु (वडा नं. १–७), गत्लाङ्ग, चिलिमे र गोल्जुङ्लाई समावेश गरिएको बनेको छ ।
यस गाउँपालिकामा जम्मा १७ सय २६ घरधुरीहरुमा पुरुष ३ हजार ८ सय ५५ जना, महिला ३ हजार ४ सय ९३ जना र अन्य ४ जना गरी कुल ७ हजार ३ सय ५२ जनसङ्ख्या रहेको छ ।
पालिका उपाध्यक्ष नबिना तामाङ पालिकाले नागरिकका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्दै आएको बताउँछिन्। स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दाको लामो समय अनुभव बटुल्नमै बितेको बताउने उनी स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्ने माग राख्ने नजिकको थलो बनेको बताउँछिन्।
जयदेशकर्मी सुसी थिङले उपाध्यक्ष तामाङसँग पालिकाले गरेका प्रगति, गतिविधि र योजनाका सन्दर्भमा कुराकानी गरेकी छिन् ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहँदाको साढे चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो अवधिमा अनुभव बटुल्ने काम भयो। तीन वर्ष त सिकाइमै बित्यो । यो अनुभवले अहिले नागरिकको आवश्यकता के हो र कहाँ के के चाहेको छ हामी भन्न सक्छौ। के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्न सक्ने भएका छौं।
स्थानीय तहले के कुरामा प्राथमिकता दिँदै आएको छ ?
प्राथमिकताको कुरा गर्दा स्थानीय तहका भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण र सडक निर्माणका काममा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । यसका अतिरिक्त नागरिकका आवश्यकता र नागरिकले धेरै लाभ लिने काममा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं।
नागरिकले स्थानीय तहलाई गाउँको सिंह दरवारको रुपमा महसुस गर्न पाएकाछन् ?
यो कुरा हामीले भन्दा पनि स्थानीय नागरिकले भन्ने कुरा हो तर हामीले सबैलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। सबैलाई समेटेर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं । नागरिकले आफूलाई आवश्यकता परेको विकासका काम र समस्या बोकेर जिल्ला र मन्त्रालय धाउन परेको छैन। स्थानीय तहमा नै उनीहरूले माग गर्ने थलो बनेको छ।
स्थानीय तहलाई कति स्वायत्तता छ ?
हामीले स्वतन्त्रता महसुस गर्न सकेका छैनौं । किनभने नागरिकका आवश्यकता धेरैछन् । कानुनी अड्चनका कारण सबै माग उपलब्ध गराउन सकिने अवश्या रहँदैन । कानुन नै मिचेर दिन मिल्दैन।
पालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा के काम गरेको छ ?
हाम्रो पालिका क्षेत्रमा सरकारी विद्यालय १२ वटा र १ वटा निजी विद्यालय छ । विद्यालयका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौं। अध्ययन गर्न खर्च जुटाउन नसक्ने र पढ्ने चाहना भएकालाई केही आर्थिक सहायता गर्ने गरेका छौं। प्राविधिक शिक्षाको लागि नै भनेर वजेट छुट्याइएको छैन ।
कोरोना महामारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?
कोरोना महामारीबाट दुई वर्ष देखि प्रभावित रहँदै आएका छौं । सुरुको वर्ष धेरै काम गरियो। कोरोना व्यवस्था गर्न हाम्रो पालिको आधा बजेट सकियो । प्रत्येक वडामा कोरेन्टिन बनाइयो । राहात वितरण गरियो।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पालिकाले आफ्नै योजनामा केही काम गर्दै आएको छ ?
हामीले सबैलाई कानुनमा रहेर लक्षित वर्ग सबैलाई समेटेर काम गर्दै आएका छौं।
सिमान्तकृत समुदायलाई कसरी समेट्नुभएको छ ?
हामिले दलित समुदायको लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम बनाएको छौं। महिलाको हकमा सिप मुलक तालिम दिने, अनि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। अपांगता भएकाहरूको लागि पनि कार्यक्रम ल्याएको छौ। जो एकदमै पीडित छन्, उनीहरूलाई पनि केही रकम दिएका छौं।
पालिका क्षेत्रमा पर्यटनको संभावना कस्तो छ ?
पर्यटन संभावना यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो छ, गणेश हिमाल, पार्वती कुण्ड ताल, तामाङ हेरिटेज, व्ल्याक भिलेज यस क्षेत्रका आकर्षण हुन्। त्यस्तै सङ्तैन हिमाल, रुवी भ्यालीलाई पनि पर्यटकीय संभावना को रुपमा हेर्न सकिन्छ।
यसको व्यवस्थापनको लागि के पहल भएका छन् ?
पहलहरू भन्नु पर्दा व्ल्याक भिलेज जाने बाटोमा होटलको व्यवस्थ गरेका छौं पहिला थिएन । सबै वडामा होम स्टेको व्यवस्था गरिएको छ। होटलमा काम गर्न कुकको तालिम दिएका छौं। सङ्तैन भ्यालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुको लागि हामी कार्यपालिकाको बैठक त्यही बसेका थियौं । त्यसले गर्दा पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुगेको छ।
कृषिका के के काम भएकाछन् ?
कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छौं। सिंचाइ कुलो बनाउने ,बिउबिजन उपलब्ध गराउने, अग्र्यानिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम गरेका छौं। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने काम भएको छ।
पहिले र अहिलेका के फरक पाउनुभएको छ ?
धेरै फरक छ , परिवर्तन धेरै भएको छ। हिजो गाबिस भर १० लाख मात्रै बजेट आउँथ्यो, त्यसको लागि पनि जिल्लामा बजेट माग्दै धाउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पालिकामा पर्याप्त बजेट आउँछ । त्यसको सही सदुपयोगबाट महसुस गर्ने गरि विकासका काम गर्न संभव भएको छ।
बेरोजगारहरूलाई सिपमुलक तालिम दिएर आत्र्मानिभर बनाउन प्रयास गरिएको छ। कृषि र अन्य सीप मुलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाएको छ।
२० वर्षसम्म बनाउन नसक्ने ठाँउमा सडक निर्माण गरिएको छ। सबै वडामा बिजुली पुगेको छ।
स्थानीय तहले भोग्दै आएका चुनौती के हुन् ?
चुनौती धेरै आए, काम गर्दा गर्दा चित्त नबुझ्ने, कति गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिइने समस्या छ।
यसको समस्या समाधान कसरी हुनसक्छ ?
यसको लागि स्थानीय सरकारलाई पनि कार्यबिधी र नीति नियम बनाउन दिनुपर्यो । जति पाउनु पर्ने अधिकार पालिकाले पाउन सकेन, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्यो ।